Kulan KDQ iyo saddexda Xisbi qaran ku wadda yeesheen xarunta KDQ 15/04/2017 | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 April 15 News Kulan KDQ iyo saddexda Xisbi qaran ku wadda yeesheen xarunta KDQ 15/04/2017
Kulan KDQ iyo saddexda Xisbi qaran ku wadda yeesheen xarunta KDQ 15/04/2017
Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo kulan kula yeeshay maanta oo Sabti ah 15/04/2017 saddexda xisbi qaran xarunta KDQ. Kulankan oo KDQ ugu bandhigeen saddexda Xisbi Qaran iyo xubnaha joogtada ula shaqeeya kDQ ee ka socda saddexda xisbi qaran (task force) hawlaha kaadhbixinta ka bilaabmi doonta Gobolada Awdan, Saaxil iyo 12ka goobood ee xeebaha Gobolka sanaag dhamaadka bishan.
Guddida KDQ oo u kala bixi doona maalinta bari ah labada Gobol waxa ay komishanku u soo gudbiyeen saddexda xisbi qaran sida ay hawshu u bilaabmayso iyo gobal kasta xubnaha Guddida ee ku qoran ama ka hawl gali doona.
Gabagabadii Waxa ay saddexda xisbi qaran ku amaaneen KDQ habsami u socodka hawlaha kaadh bixinta iyo abaabulkooda. Sidoo kalana waxay saddexda Xisbi Qaran la qaateen KDQ dhamaan hawlihii ay guddida KDQ u soo bandhigeen.